ကိုယ်သေရင် ငိုမယ့်လူထက် ကိုယ်ငိုမှာကို သေမလောက်ကြောက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပဲ ချစ်ပါ – Shinyoon
ကိုယ်သေရင် ငိုမယ့်လူထက် ကိုယ်ငိုမှာကို သေမလောက်ကြောက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပဲ ချစ်ပါ
November 5, 2020 by Shin Yoon
မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်ပြီးမှ တစ်စနှစ်စ ပြန်ပြီးသုတ်ပေးတာကို အချစ်လို့ထင်နေတာလားကလေး တကယ်ချစ်တဲ့လူက ကိုယ့်ကို တစ်ခါတစ်ရံ နာကျင်ကောင်း နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် သစ္စာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဘယ်တော့မှ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး သူ့ကြောင့် မျက်ရည်ကျဖို့မပြောနဲ့ တခြားသူကြောင့် မျက်ရည်ကျမှာတောင် စိုးတဲ့သူပါ အရာရာကို အလျှော့ပေး အလိုလိုက်တာမှ အချစ်မဟုတ်ဘူး
အလိုလိုက်သင့်သလောက်လိုက်ပြီး တားသင့်တန်တာကို တားတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့အချစ်က ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ် မျက်ရည်လေးတစ်နှစ်စလေး သုတ်ပေးတတ်တဲ့ ရင်ခွင်မှာ ပျော်နေရင်တော့ မျက်ရည်မကျအောင်ထားနိုင်မယ့် ရင်ခွင်တစ်စုံနဲ့ ဝေးနေဦးမှာပဲလေ . . .
နှလုံးသားရဲ့ အလိုဆန္ဒအရ ချစ်ခဲ့ပေမယ့် ဦးဏှောက်လေးနဲ့ စဥ်းစားချင့်ချိန်တတ်ပါ အချစ်လို့ ခေါင်းစဥ်တပ်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို အကျဥ်းချထားတတ်တဲ့ ထောင်လို အချစ်မျိုးမှ အများကြီးပဲ
ဟိုလို မနေနဲ့ ဒီလိုမနေနဲ့ ဟိုနေရာမသွားနဲ့ ဒီနေရာမသွားနဲ့ စသည်ဖြင့် အရာအားလုံးကို လိုက်ပြီးကန့်သတ်ချုပ်ချယ်နေရင် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လွတ်လပ်နိုင်တော့မလဲမလွတ်မလပ်နဲ့ နေရတဲ့လူတစ်ယောက်မှာ သေချင်စိတ်ပဲ ရှိတယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မပျော်ရွှင်ရဘူး ။
ဒါကြောင့် ချစ်ပါ . . . ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်တွေလူကိုပဲ ချစ်ပါ ကိုယ်သေရင် ငိုမယ့်လူထက် ကိုယ်ငိုမှာကို သေမလောက်ကြောက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပဲ ချစ်ပါ ကိုယ့်ကို စိတ်ချယုံကြည်တတ်တဲ့ အရပ်မှာပဲ နေပါ
ကိုယ်ထွက်သွားမှာ သေမလောက် ကြောက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်လက်ကိုပဲ ဆွဲပါ ။
မ်က္ရည္က်ေအာင္လုပ္ၿပီးမွ တစ္စႏွစ္စ ျပန္ၿပီးသုတ္ေပးတာကို အခ်စ္လို႔ထင္ေနတာလားကေလး တကယ္ခ်စ္တဲ့လူက ကိုယ့္ကို တစ္ခါတစ္ရံ နာက်င္ေကာင္း နာက်င္ေစႏိုင္ပါတယ္
ဒါေပမယ့္ သစၥာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး သူ႔ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်ဖို႔မေျပာနဲ႔ တျခားသူေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်မွာေတာင္ စိုးတဲ့သူပါ အရာရာကို အေလွ်ာ့ေပး အလိုလိုက္တာမွ အခ်စ္မဟုတ္ဘူး
အလိုလိုက္သင့္သေလာက္လိုက္ၿပီး တားသင့္တန္တာကို တားတတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္က ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိပါတယ္ မ်က္ရည္ေလးတစ္ႏွစ္စေလး သုတ္ေပးတတ္တဲ့ ရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေနရင္ေတာ့ မ်က္ရည္မက်ေအာင္ထားႏိုင္မယ့္ ရင္ခြင္တစ္စုံနဲ႔ ေဝးေနဦးမွာပဲေလ . . .
ႏွလုံးသားရဲ႕ အလိုဆႏၵအရ ခ်စ္ခဲ့ေပမယ့္ ဦးေဏွာက္ေလးနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္ပါ အခ်စ္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကို အက်ဥ္းခ်ထားတတ္တဲ့ ေထာင္လို အခ်စ္မ်ိဳးမွ အမ်ားႀကီးပဲ
ဟိုလို မေနနဲ႔ ဒီလိုမေနနဲ႔ ဟိုေနရာမသြားနဲ႔ ဒီေနရာမသြားနဲ႔ စသည္ျဖင့္ အရာအားလုံးကို လိုက္ၿပီးကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနရင္ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ႏိုင္ေတာ့မလဲမလြတ္မလပ္နဲ႔ ေနရတဲ့လူတစ္ေယာက္မွာ ေသခ်င္စိတ္ပဲ ရွိတယ္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မေပ်ာ္႐ႊင္ရဘူး ။
ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ပါ . . . ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေတြလူကိုပဲ ခ်စ္ပါ ကိုယ္ေသရင္ ငိုမယ့္လူထက္ ကိုယ္ငိုမွာကို ေသမေလာက္ေၾကာက္တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိုပဲ ခ်စ္ပါ ကိုယ့္ကို စိတ္ခ်ယုံၾကည္တတ္တဲ့ အရပ္မွာပဲ ေနပါ
ကိုယ္ထြက္သြားမွာ ေသမေလာက္ ေၾကာက္တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္လက္ကိုပဲ ဆြဲပါ ။
ကျွန်မ မက်တဲ့ငွေမှာ သူတစ်ပါးမျက်ရည်စက်တွေ မပါဘူး
ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဟန်ဆောင်တတ်လာတာပါပဲ